Cabdullaahi Shabeelow Oo Lagu Dilay Degmada Dharkenley. – Calamada.com
Cabdullaahi Shabeelow Oo Lagu Dilay Degmada Dharkenley.
Rag hubeysan waxey goordhow gudaha degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaay nabadsugida dowlada Ridada federaalka’iyadoona warar hordhac ah laga helayo dilka sarkaalka.
Raga hubeysan ayaa sarkaalka ku weeraray qeybo ka mid ah degmada Dharkanley’iyagoona dhowr xabadood kaga dhuftay qeybaha sare ee jirka.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray C/llaahi Shabeelow kaasi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaay nabadsugida dowlada Ridada isagoona sirdoonka dowlada ka tirsanaay laga soo bilaaba dowladii KM ee C/llaahi Yuusuf Axmed.
Sarkaalkan saaka lagu dilay degmada Dharkenley ayaa noqonaya sarkaalkii 6 aad oo wax ka yar 48 saac gudahood ah lagu dila magaalada Muqdisho’iyadoona saacadihii lasoo dhaafay 5 sarkaal oo ka tirsan BS-ta dowlada ridada lagu kala dilay degmooyinka Wadajir’Boondheera iyo degmada Yaaqshiid.
Previous: Roobabka Xilliga Guga Oo Ka Curtay Gobalada Hiiraan Iyo Galgaduud.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 26-06-1437 Hijri.